Mepụta utu aha na GNU / Linux | Site na Linux
E nwere ụzọ dị mfe iji hazie ma mee ka ụfọdụ iwu anyị na-ejikarị eme ihe dị mfe "ihe njikwa ahụ", Site n'iji utu aha.
Un utu aha dị ka aha ya na-egosi, ọ ga-enyere anyị aka iji okwu dị nkenke ma dị mfe dochie okwu ma ọ bụ usoro okwu. Ka anyị were ihe atụ bara uru, ka anyị kwuo na anyị chọrọ ịhụ ndekọ site na sistemụ, na-eji ngwa akpọrọ Ahụhụ nke bụ maka agba ya pụta na console. Ahịrị ga-abụ:
Mana ejiri m n'aka na ọ ga-adị mfe ma ọ bụrụ na kama ịde ihe niile, anyị tinyere njikwa ahụ maka ọmụmaatụ, ihe dị mfe dịka:
Eziokwu? Ọ ga-adị mma ma dị mfe icheta. Mgbe ahụ, olee otu anyi ga esi eme ya?
Mepụta utu aha.
Mepụta aha aha dị mfe. Syntax ahụ ga - abụ:
utu aha short_word = 'iwu ma ọ bụ okwu iji dochie'
ọ bụrụ na anyị ewere ihe atụ gara aga ọ ga - abụ:
utu aha syslog = 'sudo tailf -n 5 / var / log / syslog | ccze '
A na-etinye iwu ahụ n'otu ntinye. Ma ajụjụ bụ Ebee ka anyị ga-etinye nke a? Ọfọn, ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ bụrụ naanị nwa oge, naanị anyị dee ya na njikwa ahụ ọ ga-adịgide ruo mgbe anyị mechiri ya.
Ugbu a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ya kpamkpam, anyị na-etinye nke a n'ime faịlụ ahụ ~ / .bashrc nke dị na nke anyị / n'ụlọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ ka anyị kere ya (mgbe niile na ntụpọ n'ihu). Mgbe anyị gbakwunyere akara nke utu aha Na faịlụ a, anyị na-etinye na njikwa:
Na njikere !!!
Mara: Yesnyaahụ n'ihi nsogbu na ISP anyị enweghị ike bipụta ihe ọ bụla na <° Linux, nke anyị na-arịọ mgbaghara
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Mepụta aha na GNU / Linux
Typedị post a anaghị afụ ụfụ iji mee ka ngwaọrụ ndị ahụ anyị na-anaghị ejikarị eme ihe kwa ụbọchị. Ọzọkwa, ọ naghị agafe agafe; afọ atọ mgbe edere ya ma ọ dị ka ụbọchị mbụ.
Tinye ya, ma ọ dịkarịa ala na debian, a na-atụ aro ka ị jiri faịlụ .bash_aliases gbakwunye aha gị karịa nke faịlụ ị kwuru. Ọ. .bashrc na-eleba anya na nyocha aha faịlụ m na-ekwu.
Daalụ maka nkuzi ahụ. Enwere m ajụjụ: gịnị ka iwu a '. .bashrc '? na tumadi ihe ntụpọ (.) n'ihu faịlụ .bashrc na-eme?
Amaara m na oge agafeela, mana akara ngosi n'ihu aha aha na-eme ka ọ zoo na folda, yabụ ọ ga-adị ebe ahụ, mana ịgaghị ahụ ya ruo mgbe ị gosipụtara faịlụ ezoro ezo.
Okechukwu 669 dijo
Echeghị m na ọ na-ezo aka n’otu ebe izoro ezo faịlụ. Ọ bụrụ na i lelee anya nke ọma, enwere otu nkewapụrụ site na oghere tupu:
Na mbụ, echere m na ọ ga-agba ọsọ faịlụ ahụ ma ọ bụ bubatagharịa ozi dị na ya. Kama m ga-agbanyeghachi ka aha ndị ahụ wee nwee mmetụta, yabụ, iwu ahụ ka bụ amaghị.
Kedụ ka ị ga - esi n ’n’iwu n’iwu n’agbanyeghi na onwere onye na - ekwu okwu banyere iwu a? (Ihe nlele: kedu ka ị ga esi eji rm iwu ma ọ bụrụ na nke a bụ utu aha ikwughachi?)
Nnọọ ekele maka nke a. Cheers!
Ndewo, daalụ maka nkuzi a, ọ nyeere m aka nke ukwuu.
Etu ị ga-esi nweta ụdị Microprocessor na Terminal